3. တည်ငြိမ်သော torque ရရှိနိုင်သည်။
tweet အသံမရှိပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်မျက်နှာပြင်၏စလစ် - ချော်ဖြစ်စဉ်သည်ပွတ်တိုက်မှုနည်းလမ်းတွင်ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်မဖြစ်ပေါ်နိုင်၊ ဆက်သွယ်မှုမရှိသောကြောင့်စစ်ဆင်ရေးသည်အလွန်တိတ်ဆိတ်သွားသည်။
5. အပူစွမ်းရည်ကြီးမားသည်။ သံလိုက်အမှုန့်များကိုအပူထိန်းနိုင်မှုနှင့်အကောင်းဆုံးအအေးခံနိုင်သောကြောင့်အလွန်ပြင်းထန်သောစဉ်ဆက်မပြတ်လျှောလည်လှုပ်ရှားမှု၌ပင်စိတ်အေးဆေးမှုဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
၆။ စဉ်ဆက်မပြတ်မောင်းနှင်နိုင်သည့်အခြေအနေကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ တည်ငြိမ်သောပွတ်တိုက်မှု၏ကိန်းများသည်ပွတ်တိုက်အားပွတ်တိုက်၏မြှောက်ဖော်ကိန်းနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သဖြင့်အပြည့်အဝချိတ်ဆက်သောအခါတုန်ခါမှုမရှိနိုင်ဘဲအရှိန်နှင့်အရှိန်လျှော့ခြင်းကိုဝန်နှင့်အညီညှိနိုင်သည်။
၁။ တိကျမှန်ကန်သော torque control torque control range သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး၊ ဂီယာလည်ပတ်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောလျှပ်စီးပမာဏတို့သည်မှန်ကန်သောအချိုးအစားတွင်ရှိပြီးမြင့်မားသောတိကျသောထိန်းချုပ်မှုကိုသိရှိနိုင်သည်။
စူပါအလွိုင်းသံလိုက်အမှုန့်များ သုံး၍ စူပါအပူခုခံနိုင်မှု၊ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ ဓာတ်တိုးနိုင်မှုနှင့်ချေးနိုင်စွမ်းနှင့်သက်တမ်းကြာရှည်ခြင်း။
၃။ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေသောစွမ်းရည်၏ထူးခြားသောတည်ငြိမ်မှုသံလိုက်အမှုန့်သည်ကောင်းမွန်သောသံလိုက်လက္ခဏာများရှိပြီးအမှုန်များအကြားစည်းနှောင်အားသည်တည်ငြိမ်ပြီးလျှောနေသော torque သည်အလွန်တည်ငြိမ်သည်။ ၎င်းသည်တော်လှန်ရေးအရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။ အချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေစေနိုင်သည်။
(၄) စဉ်ဆက်မပြတ်လျှောလျှောလည်ပတ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအပူဖြန့်ကျက်မှုနှင့်တစ်သမတ်တည်းအပူပုံသဏ္formationာန်ရှိသောအအေးခံအဆောက်အအုံကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သံလိုက်အမှုန့်များ၏မြင့်မားသောအပူခံနိုင်ရည်နှင့်တွဲဖက်ပြီးကြီးမားသောဆက်သွယ်မှုနှင့်ဘရိတ်နိုင်ခြင်းနှင့်စွမ်းအားလျှောခြင်းတို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တုန်ခါမှုမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့လျှော့ချနိုင်သည်။
၅။ ဆက်သွယ်မှုသည်ချောချောမွေ့မွေ့ရှိပြီးသက်ရောက်မှုမရှိသည့်အခါသက်ရောက်မှုသည်အလွန်နည်းသည်။ သက်ရောက်မှုမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့စတင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခံနိုင်ရည် torque သည်အလွန်သေးငယ်ပြီးအသုံးမကျသောအပူထုတ်လုပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ။
၆။ မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလည်ပတ်မှုအတွက်သင့်တော်သောမြန်ဆန်သောတုန့်ပြန်မှုနှင့်အထူးအပူဖြန့်ဖြူးမှုဖွဲ့စည်းပုံ၊ သင့်လျော်သောကြိမ်နှုန်းမြင့်သောလည်ပတ်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။
၇။ ပေါ့ပါး။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိ၊ သက်တမ်းရှည်၊ ကျစ်လစ်ပြီးပေါ့ပါးသည်။ အပူချိန်မြင့်ခံနိုင်သည့်ကွိုင်များနှင့်အထူးအမဲဆီ berings များကိုသုံးပါ။ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုးရန်ဝတ်ဆင်လေ့ရှိသည့် armature တွင်အထူးဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
အထက်ဖော်ပြပါသံလိုက်အမှုန့်ဘရိတ်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်၎င်းကိုစက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပလတ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ အထည်အလိပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်ဆေးဆိုးခြင်း၊ ဝါယာကြိုးနှင့်ကေဘယ်ကြိုး၊ ထို့အပြင်သံလိုက်အမှုန့် clutch ကိုလည်းကြားခံစတင်, Overload ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, မြန်နှုန်းစည်းမျဉ်းများစသည်တို့ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ သံလိုက်အမှုန့်ဘရိတ်များကို dynamometer တင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်၏ဘရိတ်အသုံးပြုခြင်းများတွင်လည်းအသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ TH-101C အပူအရည်ပျော်ကော် laminating စက်
နောက်တစ်ခု: အပူပေးအရည်ပျော်ကော် Laminating စက် TH-101B
သံလိုက် Powder ဘရိတ်
အမှုန့် clutch ဘရိတ်
Pur Hot Melt ကော် Nonwoven Laminating စက်, Pur Hot အရည်ပျော်ကော် Laminating စက်, အဝတ်အဘို့အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating စက်, Ce လက်မှတ်ပါသောရေပူကော် Laminating စက်, ပူအရည်ပျော်ကော်လျှောက်ထား, အလိုအလျောက်အပူအရည်ပျော်ကော် Laminating Machine,